Alahady faha-26 Taona A Mandavantaona - Fihirana Katolika Malagasy
Alahady faha-26 Taona A Mandavantaona
Daty : 27/09/2008
Manaiky hiaritra ny hafanana sy ny harerahana isika rehefa mazàva ao an-tsaina ilay denie iray ho valin-kasasarana. Mpiasa ao an-tanim-boaloboka izany, saingy ambony lavitra noho izany ny Fiantsoana niantsoana antsika : ho Zanaka ao amin’i Kristy. Raha mandinika ny fiainantsika anefa isika dia mazàna tonga vesatra ny miheritreritra ny lasa, ny an’ny tena sy ny an’ny hafa. Ny an’ny tena, ireo otan’ny fahatanorana sy ny fahadisoana, angatahana fifonana lalan-dava amin’izy Tompo (salamo setriny Sal 24, 7); ny an’ny hafa, rehefa mitambesatra ny tsiaron’ny ratra nosedraina ka tsy hahafahana mamela marina tokoa amin’ny fo manontolo… tsy hino fa mety hibebaka ny ratsy fanahy, na dia mety ho amin’ny ora farany aza (vak I Ezek 18, 25-28), ka hitondra tena tahaka ny fiangavian’i Md Paoly hoe : hanao ny namany ho ambony noho ny namany avy (Vak II Fil 2, 1- 11).
Tsy mandeha ho azy ny finoana ny fibebahana, n any an’ny tena fa indrindra ny an’ny hafa. Ny fomba fiteny tanana zatra mitrotra na ny nandalo Ramaka… na tsy matoky saka fa trondro ny loaka… dia manaporofo izany. Saingy ho antsika kosa, ny fanarahana ny lalan’ny Tompo dia ny fialana amin’ny haratsiana : ny fibebahana. Raha tsy tsapantsika anefa fa ny hanehoan’Andriamanitra ny fahefany dia ny mamela heloka sy mamindra fo (Vavaka fangatahana) dia tsy ho vitantsika ny hamela heloka hatramin’ny impitopolo fito (Alahady 24 A), ary tsy ho vitantsika ny hifaly amin’ny hafa mahazo ny hivelomany isan’andro (denie iray) toa antsika na dia tsy niasa tahaka antsika aza (alahady 25 A).
Ny halehiben’ny fitiavana hoy i Kristy dia arakaraka ny fahafoizana : “tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an’izay lazainy ho tiana” (Jn 15, 13). Ohatra no navelany ho antsika : ny fahafoizana ny maha-Andriamanitra azy mba hietry toy ny mpanompo (doulos = andevo), hanome ohatra antsika fa tsy ny anaram-boninahitra tsy akory no inona fa ny fiainantsika mifanaraka amin’izany. Mampandinika ihany ny tenin’i Jesoa tamin’ny Lohandohan’ny Mpisorona sy ny loholona : “Izaho milaza marina aminareo fa ny poblikana sy ny vehivavy janga no efa mialoha anareo, ho amin’ny Fanjakan’ny Lanitra” (Mt 21, 31).
Raha mahatsapa tena ho zanaka ary isika, dia hitondra tena araka ny maha-zanaka, tsy ho sanatria hihanona amin’ny maha-mpikarama ka hiasa ihany ho an’ny denie iray, na sanatria hiaina amin’ny fiatsaram-bela-tsihy ka hanao “eny” eo am-bava ihany (Evanjely Mt 21, 28-32).
 Tamin’ny heriny, raha nahita ny sarin’ny voaloboka maintso tamin’ny matoan-dahatsoratra ny namana iray, dia nilaza tamiko fa hanahirana ny hiasa any an-tanim-boaloboka raha mbola amnta ny voaloboka : indraindray tokoa tsy ny hamboly sy ny hikolokolo no heverintsika hatao fa ny hioty izay efa nokarakarain’ny hafa.
< Alahady faha-27 Taona A Mandavantaona
Alahady faha-25 Mandavantaona Taona A >